VaMnangagwa Vokurudzira Vanhu Kusiyana neTsika yeKungochema neZvirango
Ndira 15, 2018
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti mashoko emutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisiyane netsika yekuchema nezvirango mashoko makukutu, nekuti vanhu vemuZanu PF vanongochema nezvirango zvisipo.
“Dambudziko guru pane zveupfumi hweZimbabwe hazvisi zvirango zvisipo, asi kuondonga nyika pamatongerwo, huwori, ee, chizivano uyezve kusagona basa, ndozvauraya nyika. Kwete zvirango zvinenge zviri muzviroto zvevanhu,” VaMavhinga vanodaro.
Vanotiwo panyaya yekurudziro yekuti vanhu vasiyane nemhirizhonga yakataurwa naVaMnangagwa, zvinofanirwa kutangira kubato ravo reZanu PF, uyewo kuti mapurisa atevere mutemo.
“Shoko rekuti mhirizhonga kwete pane zvematongerwo enyika ishoko rakanaka, asika muromo hauzarirwi nerwizi. Chakakosha kuita kuratidza nemaitiro kuti mhirizhonga haitenderwi. Kureva kuti VaMnangagwa ngavataurire mapurisa kuti vaite basa sebasa, vanenge vaita mhirizhonga vasungwe.”
Bepanhau reSunday Mail rinoti VaMnangagwa vakaudza musangano wemadzishe nemusi weSvondo pavakasangana navo muGweru kuti vanhu vanofanirwa kudzidza kushandisa zviripo kuti zviburitse shanduko.
Vakawanda vanoona mashoko aVaMnangagwa aya panyaya yezvirango zvakatemera nyika, sekutsauka kukuru kubva kurwiyo rwehurumende yeZanu PF rwekungochema nezvirango pose-pose.
VaMnangagwa vanonzi vakakurudzirawo vana veZimbabwe vasiyane netsika yemhirizhonga apo nyika yatarisana nedzesarudzo, vachiti vanhu vanofanirwa kubatana nekugarisana kunyange hazvo vaine maonero akasiyana mune zvematongerwo enyika.
Mhirizhonga inonzi yatotanga mune mamwe matunhu akaita seMasvingo neEpworth, kunyange hazvo isati yapararira nenyika yose.